Amaala Antigua na Barbuda - Estlọ ala na ụlọ
Iji ruo eru ịbụ nwa amaala n'okpuru nhọrọ ezigbo ụlọ, gọọmentị chọrọ ndị na-arịọ arịrịọ ka ha tinye ego n'ụlọ akụ họpụtara, ụlọ ọrụ gọọmentị akwadoro na uru nke opekata mpe US $ 400,000 tinyere ịkwụ ụgwọ ụgwọ nhazi gọọmentị na ụgwọ ọrụ ike.
Maka otu na-arịọ arịrịọ, ma ọ bụ ezinụlọ nke 4 ma ọ bụ karịa
Maka ezinụlọ nke 5 ma ọ bụ karịa: -
Na mgbakwunye, abụọ na-arịọ akwụkwọ gaferela ire ma ọ bụ zụta nkwekọrịta nwere ike itinye ọnụ maka ụmụ amaala site na ntinye ego nke na onye ọ bụla na-achọ itinye ego kacha nta nke US $ 400,000.
Onwere ikike inweta ala na ụlọ nwere ike ịnye ọfụma site na ụlọ ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụrụhaala na ụlọ ọrụ ahụ enyerela ndị niile chọrọ itinye akwụkwọ ikike ya niile aka ma ọ bụ na ọ nọ n'ọnọdụ dị mma n'okpuru iwu Antigua na Barbuda. ma ọ bụ nke dị n'ụsọ ma nyefee ihe akaebe a na-apụghị ịkọwa akọwa ya maka inwe uru ọ bara, nke ihe ndekọ a ga-abụ onye ọrụ na-edebanye aha ya.
Dịka usoro ntinye n'ọrụ n'okpuru nhọrọ a gụnyere ịzụta ala na ụlọ, nke a nwere ike ịgbatị oge nhazi ahụ dabere na ihe onwunwe ahọrọ. Enweghi ike rezigharị ụlọ ọ bụla ruo mgbe afọ ise gachara, zụrụ ọ gwụla ma ịzụrụ ụlọ ala ọzọ akwadoro na Antigua na Barbuda.
Enwere ike itinye akwụkwọ anamachọihe maka ikike ịbụ nwa amaala site na nhọrọ nnweta ụlọ ala maka ikike inweta ụlọ (CIU) mgbe ejiri nkwekọrịta azụmaahịa na ire ọrịre n'aka onye nrụpụta nke akwadoro, nke a ga-enyefe ngwa ndi mmadu.
Mgbe ị nyefechara akwụkwọ anamachọihe gị, a ga-agwa gị ka ị kwụọ ụgwọ maka ịdị uchu na ụgwọ 10% nke ego nhazi gọọmentị. Mgbe ị nwetara akwụkwọ ozi ihu ọma, a ga-agwa gị ka ị kwụọ ụgwọ nke ego gọọmentị na-akwụ ụgwọ na ego niile maka onye nrụpụta n'okpuru ọrịre na ịzụta nkwekọrịta iji mee ka aha debanye aha gị n'aha ma nye ohere maka mmejupụta nke ezigbo itinye ego nke ala na ụlọ dịka ntuziaka nke Citizenship site na Investment Unit (CIU) guzobere.
Ozugbo enwetara, a ga-enye akwụkwọ ikike maka ndị isi akwụkwọ na ndị ezinaụlọ ha nke ha ga-enyefe akwụkwọ maka paspọtụ yana akwụkwọ na akwụkwọ ọ bụla na-eso ya.
Onye nnọchi anya gị / onye nnọchi anya gị ga-enye gị ndụmọdụ ụbọchị maka nke ọ bụla;
Gaa Antigua na Barbuda ịnakọta paspọtụ gị ma theụọ iyi ma ọ bụ nkwuputa nkwenye gị
Gaa na Embassy, ​​High Commission ma ọ bụ Consular Office nke Antigua na Barbuda ịnakọta paspọtụ gị na ị toụ iyi ma ọ bụ nkwenye nke ịkwado. Njikọ gaa na Embassies / Commlọ Ọrụ Dị Elu / iceslọ ọrụ Consular gosipụtara na ibe ọzọ.